हेडलाइन Archives - Nawalpur Dainik
पत्रपत्रिकाबाट, स्वाथ्य, हेडलाइन
काठमाडौँ । मुख धुने काम भनेको एकदमै सजिलो काम हो, तर सजिलै काम गर्दा पनि विशेष ध्यान पुर्याउन सकिएन भने त्यसैले विभिन्न किसिमका नकारात्मक समस्याहरू ल्याउन सक्छ, डण्डिफोर आउने, छाला चिलाउने, छाला फुस्रो हुने, आदि। फेरि यो डण्डिफोर भनेको यस्तो समस्या हो जुन हाम्रो प्रतिरक्षा शक्तिको कारण पैदा हुन्छ। मतलब छालामा भएका सुक्ष्म प्वालहरूमा विभिन्न किसिमका फोहोर अनि ब्याक्टेरियाहरू टाल्लिएर बसेका हुन्छन्, जसले गर्दा सङ्क्रमण हुन थाल्दछ। त्यसपछि हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीको मूख्य अ:ङ्ग ‘सेतो रक्तकोष’ले ती सबै सङ्क्रमित कोषहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर डण्डिफोरको रूपमा बाहिर पठाउने गर्दछ।भनेपछि यसको मूल कारण के रहेछ त भन्दा, हाम्रो छालामा भएका स(साना प्वालहरू टाल्लिनु। अनि हामीले मुख धुँदा विचार पुर्याएनौँ भने यो समस्यामा झन् झन् वृद्धि हुँदै जान्छ।मुख धुँदा तपाईँले के-कस्ता गल्तीहरू गर्नुहुन्छ ...
Sep92021 by Nawalpur DainikNo Comments
सुखी जीवनका लागि मननयोग्य तीन कुरा : चाणक्य नीति
पत्रपत्रिकाबाट, समाज, साहित्य, हेडलाइन
चाणक्य महान चिन्तक एवं दार्शनिक हुन् । उनी राजनीतिक र कूटनीतिका ज्ञाता थिए । उनैले नन्द वंशका नाश गरेर चन्द्रगुप्त मौर्यलाई राजा बनाए । उनी सम्राट चन्द्रगुप्ताका सल्लाहकार थिए । उनलाई राजधर्मका प्रणेता, आर्थिक दर्शनका प्रतिपादक र सामाजिक दर्शनकार पनि मान्ने गरिन्छ । उनले ‘चाणक्य नीति’ नामक पुस्तक लेखेका छन् । यस पुस्तकमा जीवन र जगतका बारेमा थुप्रै कुरा लेखिएका छन्, जो हामीलागि अनुकरणिय हुनसक्छ । साथै यसले हामीलाई सार्थक मार्ग पहिल्याउन मद्दत गर्छ । धन खर्च गर्दा सोंच विचार गरौं धन आफैमा पूर्णता होइन । तर, यसले हाम्रो जीवनका अभाव र आवश्यक्ताहरु परिपूर्ति गर्न सघाउँछ । जब धन हुँदैन, हामी थुप्रै कुराको उपभोगबाट बञ्चित हुन पुग्छौं । सामान्य दैनिकी पुरा गर्न पनि हामीलाई धन चाहिन्छ । धनले सुख दिदैन, तर सुख प्राप्त गर्ने साधनहरु दिन्छ । धनले स्वस्थ्य बनाउँदैन, तर स्वस्थ्य जीवन यापनका लागि आ...
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ । सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । मेहनतले आम्दानी बढाउनेछ । आयस्रोत बढ्ने र उठ्नु पर्ने रकम हात लागी हुने समय छ । आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् भने व्यापारमा पनि बढी नै फाइदा हुने समय छ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दुख पाइनेछ । विभिन्न अवसरले पछ्याए पनि अधैर्य व्यवहारले समस्या निम्त्याउन सक्छ । कामको सन्दर्भमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । अरूका विषायमा चासो लिँदा झमेला आइपर्ला । अस्वस्थताका बाबजुद कामको दायित्व बढ्नेछ । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) अर्थ अभावले चिताएको काम रोकिने सम्भावना छ । विगतको श्रमबाट भने लाभ हुनेछ । आक्षेप लगाउनेहरू दुख देलान् । ठूलो प्रयत्न गर्दा पनि उपलब्धि उठा...
Sep52021 by Nawalpur DainikNo Comments
पत्रपत्रिकाबाट, समाज, हेडलाइन
शास्त्र भन्छ दिनभरी हुने सुख शान्तिको सम्बन्ध रातसँग हुन्छ । रातीमा राम्रो निद्रा परेन भने शरीरको थकान मेटिँदैन । तपाइँलाई ताजा अनुभव रातभरीको विश्राम पछि मात्र हुन्छ । दिनभरीको सुख शान्तिका लागि यी ५ चीज सुत्ने समयमा सिरानी मुनी राख्नु राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । हनुमान चालिसा-हरेक रात सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा या सुन्दरकाण्ड पाठ गरेर पुस्तकलाई सिरानीमुनी राखेर सुत्नुस् । शास्त्रका अनुसार यसो गर्दा मन एकाग्र भएर शान्त हुन्छ । मनमा डर, अहम र खराव सपना समेत आउँदैन । सपनाविहिन सुताइनले शरीर पुनर्जाग्रित हुन्छ । फलामको उपकरण-सुत्ने बेला सिरानी मुनी फलामको उपकरण राख्नु राम्रो मानिन्छ । यसले तपाइँको नजिक नकारात्मक उर्जा आउनबाट रोक्छ । वालवालिका सुत्ने बेला सानो कैँची वा चकु सिरानी मुनी राख्ने चलन पनि यसकै कारण चलेको हो ।मुला-सिरानी मुनी मुला राखेर सुत्ने र विहान उठेर शिवलिङ्गमा अर्...
Sep42021 by Nawalpur DainikNo Comments
जीवनशैली, पत्रपत्रिकाबाट, हेडलाइन
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) यो सातामा शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । मनमा उत्साहका साथै बोली बिक्ने समय छ । नसोचेको ठाउँबाट धनागम हुनेछ । आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग तथा हौसला प्राप्त हुनेछ, तर स्वास्थ्य प्रति चैं सावधानी अपनाउनुपर्छ । वृष ( इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो ) यो सप्ताह धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । प्रेममा मधुरता छाउला । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । साताको उत्तरार्धबाट आर्थिक कारोबारमा मन्दी आउनेछ । सामान हराउने योग पनि छ । स्वास्थ्य प्रति सजग रहनु होला । मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ) यो साता लाभहानी, आयव्यय, सुख दुःख बराबरी खालको समय रहेको छ । रोकिएको काम दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा सफलता मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा व्यस्तता बढ्नुका साथै स्वास्थ्यप्रति सजगता अपन...
Sep22021 by Nawalpur DainikNo Comments
समाज, स्वाथ्य, हेडलाइन
स्वस्थ जीवन यापनका लागि शरीरका अन्य अंग जस्तै दाँत पनि स्वस्थ हुनु जरूरी छ । दाँत पहेंलो वा खराब देखियो भने व्यक्तित्वमा नै धक्का पुग्छ । अति चिसो र अति तातो खाँदा दाँत सिरिंग गर्छ, दाँतमा झन्जनाहट हुन्छ ? यस्तो समस्यालाई दाँतमा सेन्सिटिभिटि भएको भनिन्छ । शरीरका अन्य अंग जस्तै दाँत पनि स्वस्थ हुनु जरूरी छ । दाँत पहेंला वा खराब भए भने नराम्रो देखिन्छन् । दाँतमा कमजोरी आयो भने तातो वा चिसो पिउँदा पनि सिरिंग गरेर दुख्छ । अनि त सजिलै खानपान गर्न पनि सकिन्न । यो सेन्सीटीभीटी हो भन्दै यसलाई हटाउने टूथपेस्टहरू पनि बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । तर यिनले केही समयका लागि मात्र ठीक पार्ने हुन् । अलि पछि त समस्या दोहोरिइहाल्छ । यहाँ हामी दाँत सिरिंग गर्ने समस्याबाट छुटकारा दिलाउने केही घरेलु उपचारका बारेमा बताउँदैछौं । कालो तिल दाँतमा सिरिंग भयो भने दिनको दुईचोटि कालो तिल चपाउनुस् । यस...
Sep12021 by Nawalpur DainikNo Comments
जान्नुहोस् असाध्यै भाग्यमानी हुन्छन् यस्ता गुण भएका युवतीहरु
जीवनशैली, समाज, हेडलाइन
हाम्रो समाजमा अहिले पनि शास्त्रीय मान्यतालाई सत्य मानिन्छ । शास्त्रमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरेको पाइन्छ ।समुद्रशास्त्रमा शारीरिक अंगको बनावट तथा रुप रेखा हेरेर कुनै पनि ब्यक्तिको भाग्य, गुण र जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरिएको छ । जसकै आधारमा कुनै व्यक्तिको भविश्यबारे पनि बताइन्छ । शिव पुराणमा कुमार कार्तिकेयले मानिसमा यस्ता गुण बताएका छन् जुन गुण हुने ब्यक्ति सौभाग्यशाली, भाग्यमानी र शुभ फल प्राप्त गर्छन् । उक्त पुराणमा भाग्यमानी कन्यामा हुने १२ गुणबारे उल्लेख गएिको छ । त्यस्ता युवतीसँग विवाह गर्ने पुरुष पनि धेरै भाग्यमानी हुने पुराणमा उल्लेख छ । १. समुन्द्र शास्त्र अनुसार जुन युवतीको अनुहार पितासँग मिल्छ त्यस्ता युवती भाग्यमानी हुन्छन् । उनीहरुले जीवनमा सुखभोग गर्ने र चाहेको कुरा प्राप्त गर्ने उक्त शास्त्रको दावी छ । त्यस्तै आमासँग अनुहार मिल्ने युवक पनि भाग्यमानी...